Sh.Shariif “Dowladda Caburinta dadka haddii ay sii wado wax aan la fileyn ayaa ka dhalan karo” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Sh.Shariif “Dowladda Caburinta dadka haddii ay sii wado wax aan la fileyn...
Sh.Shariif “Dowladda Caburinta dadka haddii ay sii wado wax aan la fileyn ayaa ka dhalan karo”
Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sh. Axmed ayaa ka hadlay dad banaanbax ka dhigaayay Magaalada Muqdisho oo uu shalay rasaas ku furay Nin ku hubeysnaa Bastoolad oo dharcad ahaa.
Sheekh Shariif ayaa waxaa uu sheegay in ay aad uga xun yihiin tallaabadii Ninkii hubeysnaa uu ku rasaaseeyay dad kooban oo u badnaa dhalinyaro, kuwaasi oo Isgoyska Digfeer ka waday banaanbax looga horjeeday Maadxaweyne Farmaajo.
Waxaa uu sheegay in tallaabada lagu xiray gabdhaha waday banaanbaxa ay tahay mid kasoo horjeeda dowladnimada, maadaama gabdhaha dushooda lagu riday rasaasta ay ahaayeen kuwo cabirayay fikirkooda oo aan wadan hub, isla markaana falkaas loo qaadanayo in dowladda ay kasoo horjeedo Banaanbaxayada ka dhacaya Muqdisho.
Isaga oo sii hadlaayay Sheekh Shariif ayuu tilmaamay in haddii dowladda ay sii wado caburinta ay dadka ku hayso ay ka imaan karaan wax aan la fileyn, wuxuun sheegay inay dhiira-gelinayaa dadka banaanbaxyada doonaya inay ka dhigaan Muqdisho.
Ciidanka amniga dowladda Federaalka iyo kuwa NISA ayuu uga digay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif in loo adeegsado in shacabka lagu dhibaateeyo, isagoo sheegay in arrintaas Ciidamada looga baahan yahay inay ka waan-toowaan.
Hadalkaan ayuu Sheekh Shariif Ah Axmed ka sheegay Magaalada Muqdisho , kadib markii Maanta uu warbaahinta la hadlay, isaga oo hareer joogaan qaar kamid ah musharaxiinta Madaxweynaha.
Previous articleSAWIRRO: Guddoomiyaha Baarlamaanka oo gaaray Magaalada Garowe
Next articleAskar ka tirsan Qaramada Midoobay oo la dilay